Billy Summers kusuka Stephen King
Nini Stephen King igxile, kusukela esihlokweni senoveli yakhe futhi ngokusobala, kumlingiswa, singafasa amabhande ethu ngoba kukhona amajika. Akukhona ukuthi sizohlangana mhlawumbe inoveli yakhe ehamba phambili (noma mhlawumbe yebo). Okucacayo wukuthi sizojabulela...
Akekho ophikisana namuntu, kaJuan Bonilla
Kufanele kube kuyakhathaza ukuqala kabusha inoveli. Ngisho nokuba munye uJuan Bonilla. Kufanele kube yinto efana nokucabanga ukuthi eyangempela ilahlekile nokuthi kufanele iqalwe ekuqaleni, ngamanothi engqondo nohlaka lwesikripthi kufiphalisiwe kuyo yonke imininingwane yalo. Futhi futhi ...
UProfessor, kaJohn Katzenbach
Kukhona okuthile ngabantu asebekhulile, asebethathe umhlalaphansi, abafelokazi, abanesizungu nababuya kukho konke okubachaya ezweni elinobutha nohlangothi lwalo lwemibhalo olungenakuphikwa. Ikakhulu ezintweni zokungabaza ezikhomba kuleso sikhala esisongelayo esihlala sithathe isikhala phakathi kombundu we ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi26 Okulandelayo →